Words Can Change Your Brain - Dream Lab
by Andrew Newberg and Mark Robert Waldman
Words Can Change Your Brain (2012) စာအုပ်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထိရောက်စွာ၊ စိတ်ထက်သန်စွာ ချိတ်ဆက်၊ ပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းဗျုဟာ (၁၂) ခုကို လမ်းညွှန် ပြောပြပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်း တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့ သဘာ၀ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ချက်တွေ အကြောင်း အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တွေက ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ နားထောင်နိုင်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြနိုင်ဖို့နဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍတွေမှာ တိုးတတ်ချင်သူတွေ၊ ခက်ခဲတဲ့ စကားဝိုင်းတွေကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ချည်းကပ်ချင်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး သိပ္ပံပညာအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
PrevPreviousThe New Corner Office: How the Most Successful People Work from Home
NextThey Ask You AnswerNext
© 2020DreamLab.news. All Rights Reserved.
© Dreamlab.news. All rights reserved.